ويمسحها - Arabe - Birman Traduction et exemples
Vous avez cherché: ويمسحها (Arabe - Birman)
ثم صبّ ماء في مغسل وابتدأ يغسل ارجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي كان متزرا بها.
ထိုနောက်မှ ရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍ တပည့်တော်တို့၏ခြေကို ဆေးပြီးမှခါး၌စည်းထားသောပုဝါနှင့် သုတ်တော်မူ၏။
/clear: يمسح كل الرسائل من المحادثة الحالية
အကြောင်းမူကား၊ ပလ္လင်တော်အတွင်း၌ ရှိသော သိုးသငယ်သည် သူတို့ကို လုပ်ကျွေး၍ ၊ အသက် စမ်းရေတွင်းသို့ လမ်းပြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း သူတို့မျက်စိ၌ မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော် မူမည်ဟုဆိုလေ၏။
وامد على اورشليم خيط السامرة ومطمار بيت اخآب وامسح اورشليم كما يمسح واحد الصحن يمسحه ويقلبه على وجهه.
ယေရုရှလင်မြို့ အပေါ်မှာ ရှမာရိမျဉ်းကြိုးနှင့် အာဟပ်အမျိုး၏ ချိန်ကြိုးကို ငါတန်းချမည်။ ပုကန်ကို သုတ်၍ သုတ်ပြီးမှ မှောက်ထားသကဲ့သို့ ယေရုရှလင်မြို့ကို ငါပြုမည်။
mater filium (Latin>Anglais)atakayoingia (Swahili>Tagalog)characteristics (Espagnol>Anglais)i never wanted (Anglais>Tagalog)kmzta (Tagalog>Anglais)bons votos (Portugais>Italien)tillægsbehandling (Danois>Finnois)샌프란시스코를 (Coréen>Anglais)sa loob ko (Tagalog>Anglais)weinherstellung (Allemand>Grec)fe (Anglais>Serbe)hape (Albanais>Néerlandais)santa paula (Anglais>Slovaque)ddilwn i ddim (Gallois>Anglais)rangkaian (Malais>Birman)what do you look like (Hindi>Anglais)così dimmi ragazzo della california (Italien>Anglais)liver (Italien>Anglais)lower production rate; (Anglais>Russe)selectați (Roumain>Suédois)infatigable (Français>Russe)格拉斯 (Chinois (simplifié)>Finnois)padhao (Gujarati>Anglais)publicaciones (Espagnol>Anglais)täristinyksiköitä (Finnois>Tchèque)